Natural gwenya jenareta, Biogas jenareta, LPG Gesi jenareta - Naipute
Nyanzvi mukugadzira seti michina
Chinangwa chedu ndechekugadzira uye nekupa inotsigira michina yegesi jenareta seti zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Ziva kukura kwehupfumi kuburikidza nekuvakwa kwezvivakwa uye nekupa girini uye inovhenekera magetsi mhinduro.
Tine mainjiniya mazhinji ane anopfuura makore makumi matatu ekushanda ruzivo mumunda weinjini gasi uye jenareta. R & D timu inogona kuita yakasarudzika chigadzirwa dhizaini uye mazano maererano nezvinodiwa nemushandisi. Kusimudza simulation kuverenga kukomputa simulation
Chiono chedu ndechekuona kusimudzira kusimukira kwevanhu vese nekushandisa girini simba kugadzira magetsi. Zvekuti nharaunda yedu yekugara pamwe nekushandira nharaunda zvakagadziridzwa.
Weifang Naipute Gesi Genset Co., Ltd. yakavambwa muna 2008. Hofisi iri muHquququereter Base muWeifang guta, purovhinzi yeShandong uye kune traffic iri nyore uye nharaunda inonakidza yakatenderedza. Fekitori iri muAdvanced Manufacturing Industry Park nerutsigiro rwehurumende uye yakanaka indasitiri mamiriro. Sezvo zita reNPT rakagadzwa, zvigadzirwa zvikuru 10kW-1000kW gasi jenareta seti, kusanganisira gasi jenareta seti, biogas jenareta seti, oiri munda gasi jenareta seti, marasha-mubhedha gasi jenareta seti, LPG gasi jenareta seti, biomass gasi jenareta seti nezvimwe…
Chigadzirwa Magadzirirwo E800KW Biomass Gesi Ge ...
Product Magadzirirwo 260KW Biomass Gas Ge ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E80KW Biomass Gesi Gen ...
chigadzirwa zvigadzirwa zve160KW gasi / / ...